Xiaomi Redmi Book 16 Ryzen5(16GB/512GB) Grey ~ ICT.com.mm
HomeXiaomi Redmi Book 16 Ryzen5(16GB/512GB) Grey
Xiaomi Redmi Book 16 Ryzen5(16GB/512GB) Grey
Processor: AMD Ryzen54500U6x 2.3 –4GHz, Renoir (Zen 2) Graphics: AMD Radeon RX Vega6(Ryzen 4000), 20.5.1 Memory: 16GB, DDR4-2666 Dual Channel Display: 16 inch 16:9,... [Learn more]
Brand: XiaomiSKU: 169114N/ASee more: Computer Systems, Laptops / Notebooks, New Arrivals, Products, XiaomiFilter by: 16", 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Integrated Graphics, AMD Ryzen 5, EDIT-ONE, Gray, Laptops (PC), outofstock, Windows 10 Home
Processor: AMD Ryzen54500U6x 2.3 –4GHz, Renoir (Zen 2)
Graphics: AMD Radeon RX Vega6(Ryzen 4000), 20.5.1
Memory: 16GB, DDR4-2666 Dual Channel
Display: 16 inch 16:9, 1920 x 1080 pixel 138 PPI, CMN1608, IPS, glossy: no, 60 Hz
Storage: Samsung PM881 MZNLH512HALU-0000/07, 512 GB, SATA36.0 M.2
အမိုက်စား Feature တွေပါဝင်တဲ့ Xiaomi ရဲ့ Redmi Book 16 Laptop ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်ဆန်သွက်လက်တဲ့ Computing စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိဖို့ CPU အမြန်နှုန်း 2.3GHz ရှိတဲ့ AMD Ryzen54500U Processor ကို တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Turbo အနေအထားမှာ အမြန်နှုန်း4GHz အထိ ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံး ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို သွက်သွက်လက်လက် အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ 2666 MHz အမြန်နှုန်းရှိတဲ့ DDR4 RAM 16GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် RAM အသုံးပြုမှုမြင့်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမှာတော့ ‘Integrated’ ဂရပ်ဖစ်ကတ်အမျိုးအစား AMD Radeon RX Vega6ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား 16” နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် Resolution က Full HD ဖြစ်တဲ့အပြင် အရောင်အသွေးပိုမိုစိုပြည်လှပစေတဲ့ IPS နည်းပညာလည်း ပါဝင်တာကြောင့် သမာရိုးကျ Full HD မျက်နှာပြင်တွေထက် ကြည်လင်လှပတဲ့မျက်နှာပြင်ကို မြင်တွေ့ရစေမှာပါ။ Storage ပိုင်းမှာ ပုံမှန် HDD တွေထက် ဒေတာ Read/Write Speed အဆပေါင်းများစွာ မြန်ဆန်သလို ပိုမိုအကြမ်းခံပြီး အသံဆူညံမှုနည်းတဲ့ Samsung အမှတ်တံဆိပ် M.2 SSD 512GB (SATA 3) ကို တပ်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် Loading ကြာမြင့်တဲ့ Windows OS က စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာမြင့်တော့မှာဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လုံးဝပေါ့ပါးသွက်လက်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ OS အဖြစ် Windows 10 Home ကို တပါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက် Cracked Version တွေမှာတွေ့ရတဲ့ Windows Update Error တွေကို စိုးရိမ်နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ပေါ့ပါးပါးလွှာတဲ့ မီးခိုးရောင် ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပြီး 46Whr ဘတ္ထရီ အမျိုးအစားကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Fast Charging ပါဝင်တဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်း အလျင်အမြန်အားပြန်သွင်းပေးနိုင်မှာပါ။ အားသွင်း Adapter ကြိုးအတွက် Mini Type-C အားသွင်းကြိုးကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ပုံမှန် Laptop တွေလို အားသွင်းကြိုးအကြီးကြီးတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် သွားလေရာကို အလွယ်တကူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ယူဆောင်သွားနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
16"Large HD Screen, Large Field of View, More Visible
The new RedmiBook 16 Ryzen Edition bringsastronger visual shock this time. The narrow borders on both sides are compressed to 3.26mm, The screen-to-body ratio is as high as 90%, and it is equipped witha1920x1080 full HD screen, which makes it more immersive than ever.
How amazing is the display effect brought by the high color gamut of 100% sRGB? Full HD resolution, coupled with powerful hardware calibration, greatly restores the true colors, making every picture come alive, as if it were right in front of you. The color of each pixel is so full that even color-sensitive professionals are amazed.
AMD Ryzen 4000 Series Mobile Processors Powerful Inner Core, Comprehensive Upgrade
The new 7nm process and Zen2 architecture make this thin and light notebook fully upgraded again. Up to 60%, the leap-forward energy efficiency improvement bringsabrand-new enjoyment. Up to 8 core design, help more complex application scenarios, let you instantly full firepower.
CPU multi-core comprehensive performance improvement 4.1G day z dynamic acceleration frequency.
AMD Radeon Graphics Professional Movie, Easy to Control
Compared with the previous generation graphics card, the performance can be increased by 25%, bringing you computing power comparable to that of an independent display. Whether it is game entertainment or complex graphics operations, they are all at ease.
Fn+K Performance Smart Selection Mode Fits Ideal Use State
For the needs of multiple scenarios, we have carefully designedathree-level performance mode. Whether high-performance gaming entertainment, or all-round light
Loose office status Or the ultra-long battery life and quiet operation, Fn+K performance smart selection mode can be easily satisfied.
Immediately fit your use Follow the core and choose what you need.
Inside the slim body It is also equipped witha46 watt-hour high-capacity battery, withabattery life of up to 12 hours . It also supports 1C fast charge, which can be fully charged in 38 minutes.
During the lunch break, the battery is turned off and charged, and when you wake up, it is fully charged.
Mini power adapter of 5cmx5cmx2.8cm, no need to worry about scratching other items. Except notebook
It is about 100 grams lighter and can be easily put intoabackpack. The folding pin design can also charge the mobile phone. A charger is enough when you go out.